Isicacisi samanzi se-Aquarium: eyona ilungileyo yokuba namanzi acwecwe ngekristale | Ngeentlanzi
Ukucacisa amanzi e-aquarium kuluncedo olukhulu ekugcineni amanzi acocekile kwaye ngaphandle kolo luvo lwamafu lubi kangaka kwaye zininzi iingxaki zempilo zinokubangela iintlanzi zethu. Ezi mveliso ziyakhawuleza kwaye kulula kakhulu ukuzisebenzisa, nangona zinezinto ezininzi ekufuneka ziqwalaselwe.
Kungenxa yoko, Kule nqaku siza kuthetha malunga nento ecacisa amanzi e-aquarium, ukongeza ekukuxeleleni ukuba isebenza njani, uyisebenzisa njani okanye kuthatha ixesha elingakanani ukusebenza, kunye neendlela ezimbalwa zokugcina amanzi akho ecocekile. Njengoko usazi, amanzi ayinto ebalulekileyo kwii-aquariums, ngoko ke sicebisa ukuba uwafunde amanye amanqaku Umatshini wokumisa amanzi kwi-aquarium o yeyiphi amanzi oza kuyisebenzisa kwi-aquariums.
1 Yintoni icacisa amanzi e-aquarium
2 Basebenza njani abacacisi
3 Uyisebenzisa kanjani into ecacisa
4 Ithatha ixesha elingakanani ukuze iqale ukusebenza
5 Isikhokelo sokuthenga
5.1 Uhlobo lwe-Aquarium
5.2 Iimfuno (ezakho kunye ne-aquarium)
6 Uyenza njani into yokuba namanzi acwebezelayo ecristal kwi-aquarium? Amaqhinga
7 Ndingayisebenzisa into yokucacisa amanzi kwi-aquarium eneefudo?
8 Isifo esitsha se-aquarium
9 Apho unokuthenga khona amanzi acacisa amanzi acacisayo
Yintoni icacisa amanzi e-aquarium
I-JBL Clearol-Unyango ...
Ukukhanya okungaphantsi ...
Isicacisi samanzi esise-aquarium lulwelo onokulususa kulo ngemvakalelo yokungcola emanzini e-aquarium yakho ususa amasuntswana akhoyo emanzini kwaye abangela ukuba "ilifu". La masuntswana anokungena emanzini ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, umzekelo:
El powder oko kuyishiya igrabile.
Las ulwelwe (Oku kunokuba yingxaki ukuba i-aquarium inokuthinta okuluhlaza). Ezi zinokuqala ukukhula kwiintlobo ezahlukeneyo zezizathu, ezifana nokukhanya okukhulu okanye izondlo ezininzi.
Ubukho be amaminerali inyibilikiswe emanzini, efana ne-phosphates okanye i-iron, eya kwenza ukuba amanzi abonakale engwevu okanye omdaka.
Nasiphi na zokuzihombisa ipeyinti yayo iyacotha kancinci.
Mhlawumbi naloo mvakalelo yokungcola ibangelwa yi inkqubo yokuhluza Ngeengxaki (kwimeko leyo, ewe, kuya kufuneka uhlambulule amanzi kwaye ulungise inkqubo yefayile).
Basebenza njani abacacisi
Kwimeko apho amanzi akwi-aquarium yakho ekhangeleka engacacanga, kuya kufuneka uthathe amanyathelo okuyicoca kungekuphela ngenxa yezizathu zobuhle.kodwa kuba kunokuba yingozi kwiintlanzi zakho. Ke ngoko, elinye lamanyathelo okuqala kukusebenzisa ukucacisa amanzi.
Umsebenzi ulula, kuba into eyenziwa ngulwelo ibangela impendulo yemichiza edibanisa amasuntswana abangela ukuba amanzi abonakale emdaka zide zibe nkulu ngokwaneleyo ukuba zihlale emazantsi e-aquarium okanye zibanjiswe ngesihluzo. Inkqubo, kangangoko kunokwenzeka, iyakhawuleza, kuba kuthatha iiyure ezimbalwa ukucoca amanzi.
Uyisebenzisa kanjani into ecacisa
Siyakukhumbuza ukuba Kuya kufuneka usoloko ulandela imiyalelo yemveliso ukunqanda uloyiko kwaye ufumane iziphumo ezilungileyo. Uhlobo ngalunye lunedosi yalo, nangona zonke zisebenza ngendlela efanayo:
Qiniseka ukuba ifayile yakho ye- ulwelwe kunye nezityalo ziyanyangwa kwaye imveliso oza kuyisebenzisa ikhuselekile kubo. Ukuba uza kubanyanga, linda iiyure ezingama-24 ngaphambi kokusebenzisa isicacisi.
Lungisa i I-PH yamanzi kwi-7,5.
Namathela kwidosi yemveliso iilitha zamanzi nganye zibonisiwe (uninzi lukuvumela ukuba usebenzise ikepusi yemitha kwaye uthathele ingqalelo iilitha zamanzi kunye nobunzima beli yedosi). Ukuba uyahamba ngaphezulu, ungonzakalisa okanye ubulale intlanzi kwaye wenze nokungcola kwamanzi.
Thela imveliso ngononophelo emanzini.
Shiya isihluzi sisebenza ade amanzi abonakale ecocekile.
Ezinye iimveliso zikuvumela ukuba uphinde idosi de kube amanzi acoceke ngokupheleleyo, nangona kunjalo Kuya kufuneka uqiniseke ukuba iiyure ezingama-48 zidlulile phakathi kweedosi.
Ithatha ixesha elingakanani ukuze iqale ukusebenza
Ngokwesiqhelo ukucaciswa kwamanzi kuyakhawuleza, nangona kuxhomekeke kwimveliso. Ngokwesiqhelo, a 72 umyinge weyure (Oko kukuthi, iintsuku ezintathu) ukufumana amanzi acocekileyo nacocekileyo.
Abacacisi bamanzi ba Uhlobo oluthile lwemveliso, kodwa zikwanazo neenkcukacha ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uthenga, kuba zininzi iimodeli ezikhoyo. Kuyacetyiswa ke ukuba ucinge ngezi zinto zilandelayo:
Abanye abacacisi ilungele kuphela ii-aquariums zamanzi amatsha, Ngelixa ezinye zijolise ikakhulu kwiindawo zasemanzini zokutyala okanye zetyuwa. Ngokunjalo ezinye azisebenzi emanzini angakhange ahluzwe, kuba zibandakanya ukudibanisa amasuntswana ukuze azibambe kwisihluzi. Ke ngoko, sithathela ingqalelo uhlobo lwe-aquarium esinayo ukuze singasikisi kwaye silayishe iintlanzi zethu.
Enyanisweni, Zininzi iindidi zokucacisa esinokuthi sizifumane zijolise kumadama, Ngamaxesha onyaka ...
Iimfuno (ezakho kunye ne-aquarium)
Ngokufanayo, kufuneka sijonge kwaye sicinge ngeemfuno zethu kwaye, ewe, ezo ze-aquarium. Ke, sinokukhetha imveliso enikezela ngokulula ukucacisa amanzi okanye into egqibeleleyo ngakumbi, kuba kukho ezinye ezinikezela ngamathuba amaninzi, njengokulungisa amanqanaba ezondlo okanye ioksijini, enokuba ngumbono olungileyo ukuba Udinga uncedo olongezelelekileyo.
Kwakhona, kukho izicacisi ezikhawulezayo kunezinye, into ekufuneka uyigcinile engqondweni ukuba uza kuyisebenzisa ngexesha elinye, kwimeko kaxakeka okanye amaxesha ngamaxesha ukugcina amanzi acocekile.
Ngokufanayo, ixabiso liya kuchaphazela into esiyijongayo. Ukucacisa ngokulula kubiza ixabiso eliphantsi, ngelixa abo banezinye izinto ezingaphezulu benamaxabiso aphezulu. Uluvo olulungileyo inokuba kukuba yintoni efikelelekayo ngakumbi kuthi ngaphambi kokuthenga nantoni na.
Uyenza njani into yokuba namanzi acwebezelayo ecristal kwi-aquarium? Amaqhinga
Ukugcina amanzi kwi-aquarium yakho acocekile kwaye acace gca akukho nzima kakhulu, nangona ifuna uthotho Ukuphindaphinda imisebenzi ekufuneka uyenzile rhoqo, kodwa oko kuya kuba nefuthe elihle kubomi beentlanzi zakho. Njengokuba:
Zondle ngokwaneleyo ukunqanda ukutya kungaqhekeki emanzini kwaye kungcoliswe.
Ucocekile ngomnatha iintsalela ezidadayo emanzini amaxesha ngamaxesha.
Vavanya igrabile rhoqo ukuze ingakhuphi uthuli.
Gcina ifayile ye- inani elaneleyo leentlanzi-Ungabininzi kakhulu okanye i-aquarium iya kungcola ngokukhawuleza.
Gcina ifayile ye- i-aquarium ecocekileyo.
Qhubeka wenze Ukutshintsha kwamanzi rhoqo (ngotshintsho lwe-10 ukuya kwi-15% lamanzi ngeveki, umzekelo).
Qiniseka ukuba Inkqubo yeefilitha isebenza kakuhle kwaye uyihlanze xa kukho imfuneko.
Ndingayisebenzisa into yokucacisa amanzi kwi-aquarium eneefudo?
Hayi, ungaze usebenzise isicacisi kwi-aquarium eneefudu. Ezi mveliso zenzelwe kuphela iintlanzi, ezinokulimaza ezinye iintlobo.
Isifo esitsha se-aquarium
Kwimeko apho ufake i-aquarium entsha, Amanzi anokungacaci kwaye ucinga ukuba amdaka. Nangona kunjalo, kwezi meko kunokuba kungcono ukuba i-ecosystem ihlengahlengise imeko yayo entsha. Amanzi akhangeleka engacacanga ngenxa yezinto ezincinci, ezinjengebhaktiriya, ezivela kwiindawo ezinjengeentlanzi, ukutya okanye izityalo. Ngokwesiqhelo, emva kokuba ibhaktiriya ihleli, amanzi aba ngumkhenkce kwakhona. Ke ngoko, ukuba unayo i-aquarium entsha, kuyacetyiswa ukuba ulinde iveki ngaphambi kokongeza naziphi na izinto zemichiza ezinje ngokucacisa amanzi.
Apho unokuthenga khona amanzi acacisa amanzi acacisayo
Isicacisi esihle samanzi e-aquarium akukho nzima kakhulu ukufumana, nangona ngamanye amaxesha kuxhomekeka apho siya khona siza kufumana iimodeli ezingaphezulu okanye ezimbalwa, umzekelo:
En AmazonNgaphandle kwamathandabuzo, kulapho siya kuthi sifumane ezona ntlobo zibalaseleyo zeemodeli, ke ukuba sifuna into ethe ngqo, okanye uphawu oluthile, yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga kuqala. Ukongeza, banayo yonke into, kubandakanya ezona zibalaseleyo okanye ezona zaziwayo, ezinje ngeTetra, JBL, Flubal, Seachem ...
En iivenkile ezithengisa izilwanyana NjengoKiwoko noZooplus awuyi kufumana iindidi ezininzi kangaka, nangona zilunge kakhulu ukuba kuyacetyiswa ukuba uyazi ukuba uza kujonga ntoni okanye ufuna uncedo, eyona nto icetyiswayo kukutyelela enye yevenkile zabo zomzimba. , apho uya kufumana khona uncedo lobungcali. Ukongeza, iiwebhusayithi zihlala zineenkqubo zokunyaniseka kunye nezibonelelo ezinomdla ezinokukugcina ekuhambeni kwexesha.
Ngelixa kwi zikhulu ze almacen I-DIY enje ngoLoyoy Merlin, apho kukho icandelo elincinci lezilwanyana zasekhaya, awuyi kufumana ukucacisa ngakumbi kunezo zijolise kumachibi okudada okanye kumachibi apho kungaphili khona abantu abaphilayo.
Siyathemba ukuba sikuncedile ukuba uqonde ukusebenza kwe-aquarium yokucacisa amanzi, imveliso eluncedo kakhulu ukuba uyisebenzise ngendlela ethile kunye nokugcina amanzi acocekile. ye-aquarium yethu kwaye, ngenxa yoko, intle ngakumbi kwaye iyathandeka kwiintlanzi zethu. Khawusixelele, ukhe wasebenzisa isicacisi? Ebenjani amava akho? Ngaba uyasicebisa ukuba sibe nohlobo oluthile lophawu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Ukucaciswa kwamanzi e-Aquarium